TPO, PVC, EVA, PE Waterproof Sheet Extrusion Line - China TPO, PVC, EVA, PE Waterproof Sheet Extrusion Line Extrusion, Factory –Jwell
Ny orinasa Jwell dia mandray ny horonan-taratasy matevina amin'ny fampifangaroana multilayers, ity haitao vaovao ity dia mahatonga ny takelaka TPO hanana fiasa tsara manohitra ny fisokafan'ny rivotra. ny sosona afovoany dia lamba polyester ho fanamafisana, ny atiny voaravaka amin'ny fibre lamba sy ny alim-pito. Ity karazana ravin-drano TPO ity dia manana ny
endri-javatra amin'ny toetr'andro sy toetr'andro tsara izy io. Ampiasaina indrindra ho an'ny trano 、 tonelina architecture maritrano ambanin'ny tany sy ny saha tsy misy rano hafa.
Ampiasaina amin'ny famokarana PVC, EVA, PE Waterproof Sheet, izy io dia ampiasaina amin'ny indostrian'ny trano an-trano, ny maritrano ary ny lakaly, ny tetik'asa tsy tantera-drano ao amin'ny fitehirizan-drano, ny tohodrano, ny tionelina amoron-dalana, ny lalan'ny lalamby, ny fialofana amin'ny baomba, ny fitoeram-bary, ny fako fanariana rano sns.